Akkaataa fuulaa isa baafata xiqqaa keessatti filatteef, jalaantoo, ida'a yk irraa haqa. Jalaantoochi, fuulaawwan warra akkaataa fuulaa wal fakkaataa fayyadamanitti ida'ama. Galmee haaraa keessatti, akkaataa fuulaa "Durtii" qofatu tarreeffama. Akkaataawwan fuulaa warri biroon, erga ati galmicha keessatti faayidaa irra oolchitee booda, idaa'amu.
Jalaantoowwan, yeroo ati galmicha teessumaa maxxansaa keessatti daawwattu qofa, mul'atu (Mul'annoo - Teessumaa Maxxansaa aangeessi).
Mallattoon filannoo tokko, fuuldura akkaataawwan fuula warra jalaantoo qabanitti mul'ifama.
Jalaantoo tokko haquudhaaf, Saagi - Jalaantoo filiitii, ittaansuudhaan akkataa fuulaa isa jalaantoo qabu filadhu. Jalaantoochi, fuulawwan warra akkaataa fuulaa kana fayyadaman hunduma irraa, ni haqama.
Jalaantoowwan, akkaataawwan fuulaa warra galmicha keessatti fayyadaa jiran hunda, jalaantoowwan, itti ida'uuf yk irraa haquudhaaf, Saagi - Jalaantoo - Mara fili.
Jalaantoo tokko dhangeessuuf, Dhangi'i - fuula - Jalaantoo filadhu.
Title is: Jalaantoo